ကိုကိုနပ် နှင့် သူ၏ … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Food, Drink & Recipes » ကိုကိုနပ် နှင့် သူ၏ …	13
ကိုကိုနပ် နှင့် သူ၏ …
Posted by မြစပဲရိုး on Jul 26, 2015 in Food, Drink & Recipes | 13 comments
အခု ရှု ပြီး “စား” ရမဲ့ ဟင်းလျာ ကတော့ အုန်းနို့ကြက်သားဟင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထည့်ရမဲ့ အချိုးအစား တွေ က တော့ ကြိုက်သလို ထည့်ကြပါ။
နမူနာ ပြ Ingredient တွေကတော့
– ကြက် ရင်ပုံ ၄ ခု (အတုံး သေးများ တုံး)
– အုန်းနို့ Tin တစ်ဗူး
– နံနံစေ့ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း (ညက်အောင်ထောင်း)
– သံပုယိုသီး တစ်လုံး
– ပဲငံပြာရည် အကြည် ၃ဇွန်း၊ အနောက် ၁ဇွန်း (စားပွဲတင်ဇွန်း)
– ဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၅ ဇွန်း
– ကြက်သွန် နီ ၃ ဥ (ပါးပါးလှီး)
– နံနံပင် လက်တစ်ဆုပ် (အနေတော်ဖြတ်)
ပထမ ပဲငံပြာရည်၊ သံပုယိုရည်၊ နံနံစေ့ များ ကို ကြက်သားထဲ ထည့်ပြီး နယ်ကာ နာရီဝက် လောက် နှပ်ထားပါ။ သံပုယိုသီး အခွံနဲနဲ ပါ ပါးပါးလှီး ထည့်ထားတယ်၊ တကယ်က ခြစ် ပြီး ထည့်ရမှာ။
(အချိန်မရှိလဲ ဒီအတိုင်း နယ်ပြီး တန်းချက်ပေါ့)
အိုးထဲ ဆီထည့်ပြီး ဆီပူ လာရင် ကြက်သွန် ကို နဲနဲ မွှေးလာသည် အသိ ကြော်ပါ။ ရရင် ကြက်သားထည့် မွှေပါ။
ကြက်သား ညိုရောင်သန်း ရင် အုန်းနို့လောင်းထည့်ပါ။
ရေတော်တော်ခန်း လာရင် နံနံပင် အုပ်ပြီး ပါက ကျက်ပါပြီ။
ကြိုက်သလို အပို ဆာဒါးများ အားဖြည့်ပြီး ရှု “စား” သုံးဆောင်တော်မူကြပါ။
ပထမ ပဲငံပြာရည်၊ သံပုယိုရည်၊ နံနံစေ့ များ ကို ကြက်သားထဲ ထည့်ပြီး နယ်ကာ နာရီဝက် လောက် နှပ်ထားပါ။ သံပုယိုသီး အခွံနဲနဲ ပါ ပါးပါးလှီး ထည့်ထားတယ်၊
မြစပဲရိုး says: ဟိ ဟိ -အချိန်မှီလေး တစ်နေ့စာ ကိုတာ မပြုတ်တယ်။ lol:-))))
ဇီဇီခင်ဇော် says: သများး နဲ့ ကိုကိုနပ် မပြေလည်လို့ ရှောင်နေတာ ကြာပေါ့
မျက်စိနဲ့ ပဲ စားးသွားးးတယ်
@QUIL@ says: အိုင်တီပရိုဗျ…
ကမ္ဘာကြီးက ကျုပ်တို့ချက်တဲ့ ခေါက်ဆွဲတွေစားတယ်လေ…..
Ma Ei says: မြ ခူးခပ်ပြင်ဆင် ထားတာလေး ရှုယုံနဲ့မရတော့ဘူး တစ်ကယ် စားချင်တာ…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .တော်သေးတာပေါ့ ။ ရှုစားသုံးဆောင်ခိုင်းလို့။ စကရင်ကို လျှာနဲ့ လျက်ရမလား လို့ အတွေးမပွားတော့ဘူးပေါ့။
Mike says: .သွေးတက်စာတွေ မစားနိုင်
Ma Ma says: အုန်းနို့ချက်ရင် ကြက်သွန်နီလှိုင်လှိုင်ထည့်ချက်။
အုန်းနို့က သွေးတက်စေတာကို ကြက်သွန်နီက လျှော့ချပေးတယ်…. လို့ ကြားဖူးတာပဲ။
ကိုယ်တိုင် research လုပ်ထားတာမဟုတ်လို့ အာမတော့မခံနိုင်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: အရီးရယ်… ခရမ်းကြွပ်သီးလေးထည့် ပင်စိမ်းရွက်အုပ်ပြီး…
အုန်းနို့နဲ့ ယိုးဒယားကြက်သားဟင်းချက်လိုက်ရင် ပိုဂွဒ်မှာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အားလုံးဘဲ ကျေးဇူးကြီးပါ။
မင်း ရဲ့ အရီး က အခု အိုင်တီ သွေးမဟုတ်တော့ဘူး။
ပုံသေကားချပ် အတိအကျ လုပ်သလို နဲ့ စာရင်းညှိတတ် နေပြီ။
အရောင်ပြောင်း ဖို့ ကစားနည်း တွေ တတ်နေလေပြီ။ lol:-)))))
manawphyulay says: စားပဲ စားချင်တာ အဲလို ချက်ချင်ဘူး။ ဘိုလိုလုပ်ရပါ့…
ဟုတ်ပြီ နည်းလမ်းကို ယောက်ျားပြောပြလိုက်ပြီး သူ ချက်တာပဲစားတော့မယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: အဲဒီကိုကိုနပ်က.. ခုတလော.. ကျမ်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ဆိုပြီး..တော်တော်ခေတ်စားနေတာ..။
အရင်သိထားသမျှက.. ကိုလက်စရောတက်တယ်.. မပျော်ဝင်တဲ့အဆီတွေဖြစ်တယ်..။ ဘာညာပေါ့..။
တကယ်ကတော့.. ဖိလစ်ပင်းနိုတွေဟင်းတွေထဲ.. ကိုကိုနပ်တွေထည့်စားနေကြတာ.. နှစ်၁၀၀မက..
Coconut craze hits Starbucks lattes, but this superfood isn’t all it’s cracked up to be
Tuesday, March 3, 2015, 2:00 AM
Last Updated: Feb 18, 2015 | By Kathryn Gilhuly
The health benefits of… coconut milk | BBC Good Food
Coconut milk, especially the lower fat variety, can be used in moderation (1-2 times per week). However, The British Heart Foundation recommend avoiding the …
မြစပဲရိုး says: ဖိလစ်ပင်းနို တွေချက်တဲ့ ဟင်း တော့ မသိ။
ယိုးဒယား စာ တွေမယ်တော့ ကျောက်စ် ပြောတဲ့ ပင်စိမ်းထည့်တာတို့ ၊ သံပုရာရည် သုံး တာတော့ က အလကား ဟုတ်မယ်မထင်ဘူး။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ယိုးဒယားစာအတော်များများမှာလဲ အုန်း ကင်းတာမဟုတ်။
လူကြီး/လူငယ် တိုင်း စားနေတာ သူတို့ မှာ ဖြေဆေး တွေ ပါလို့သာနေမှာ။
. ဒေါ်မနောလေး – ဒီအချိန်က အခွင့်အရေးယူလို့ တရားအမျှဆုံး အချိန်ဘဲ။
အခွင့်အရေး မဆုံးစေနဲ့။ ချက်သာချက်ခိုင်းပေရော့။ :-)))
Alinsett @ Maung Thura says: သားကတော့ စခွင်ကို လျှာနဲ့ လျက်ပလိုက်တယ်